(၇)ရကျသားသမီး နိုဝငျဘာလ တဈလစာဗဒေငျဟောစာတမျး - Tech View 24
(၇)ရကျသားသမီး နိုဝငျဘာလ တဈလစာဗဒေငျဟောစာတမျး
VDO__(၇)ရကျသားသမီး နိုဝငျဘာလ တဈလစာဗဒေငျဟောစာတမျး
Previous: 1 . 11 . 2021 ည ၈ နာရီ အမေရိကန် ကို ရင်ဆိုင်ဖို့ မင်းအောင်လှိုင် ဓားစာခံ ရှာပြီ အမေစု ဘာပြောသလဲ
Next:3. 11 . 2021 မနက် ၈ နာရီ ပြည်သူတွေ ထင်ထားတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီ အဲလောက်မြန်မယ်မထင်ထားဘူး